Marko 16 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
16 Ngoko ukudlula kwesabatha,+ uMariya Magadala,+ noMariya unina kaYakobi, noSalome bathenga iziqholo ukuze bamthambise.+ 2 Yaye ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala+ lweveki beza kwingcwaba lenkumbulo, lakuba ilanga liphumile.+ 3 Kwaye babesithi omnye komnye: “Ngubani na oya kusiqengqela ilitye lisuke kumnyango wengcwaba lenkumbulo?” 4 Kodwa bakukhangela, babona ukuba ilitye laliqengqiwe lesuka, nangona lalilikhulu kakhulu.+ 5 Xa bangenayo kwingcwaba lenkumbulo, babona umfana ehleli kwicala langasekunene ambethe umwunduzo omhlophe, yaye baqhiphuka umbilini.+ 6 Wathi kubo: “Musani ukuqhiphuka umbilini. Nifuna uYesu umNazarete, obebethelelwe.+ Uvusiwe,+ akakho apha. Khangelani! Indawo abebembeke kuyo.+ 7 Kodwa hambani, niye kuxelela abafundi bakhe noPetros ukuthi, ‘Uhamba phambi kwenu ukuya eGalili;+ niya kumbona apho, kanye njengoko wayenixelele.’”+ 8 Ngoko ekuphumeni kwabo basaba kwingcwaba lenkumbulo, kuba babengcangcazela yaye besoyika kakhulu. Abazange baxelele bani nantoni na, kuba babesoyika.+ UMQUKUMBELO OMFUTSHANE Imibhalo-ngqangi neenguqulelo ezithile zamva zinomqukumbelo omfutshane emva koMarko 16:8, ngokulandelayo: Kodwa zonke izinto ezaziyalelwe bazibalisa ngokufutshane kwabo babejikeleze uPetros. Ngokubhekele phaya, emva kwezi zinto, uYesu ngokwakhe wathumela ngabo ukusuka empuma ukusa entshona isibhengezo esingcwele nesingenakonakala sosindiso olungunaphakade. UMQUKUMBELO OMDE Imibhalo-ngqangi ethile yamandulo (iCodex Alexandrinus, iCodex Ephraemi, iCodex Bezae) kunye neenguqulelo (iLatin Vulgate, iCuretonian Syriac, neSyriac Peshitta) zongezelela umqukumbelo omde olandelayo, kodwa iCodex Sinaiticus, neCodex Vaticanus, iSinaitic Syriac codex, kunye neArmenian Version ziyawushiya: 9 Emva kokuba evukile ekuseni ngosuku lokuqala lweveki wabonakala okokuqala kuMariya Magadala, awayekhuphe kuye iidemon ezisixhenxe. 10 Wahamba waya kuxela kwabo babenaye, njengoko babezilile yaye belila. 11 Kodwa bona, bakuva ukuba ubuyele ebomini yaye ukhe wabonwa nguye, abazange bakholwe. 12 Ngaphezu koko, emva kwezi zinto wabonakala ngolunye uhlobo kwababini babo ababehamba kunye, njengoko babesiya emaphandleni; 13 yaye babuya baza baxela kwabanye. Nabo abazange babakholelwe. 14 Kodwa kamva wabonakala kwabalishumi elinanye ngokwabo njengoko babengqendeve etafileni, kwaye wakungcikiva ukuswela kwabo ukholo nobuntliziyo-lukhuni babo, ngenxa yokuba abazange babakholelwe abo babembonile evusiwe ekufeni. 15 Yaye wathi kubo: “Yiyani ehlabathini lonke nize nishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. 16 Lowo ukholwayo aze abhaptizwe uya kusindiswa, kodwa lowo ungakholwayo uya kugwetyelwa isohlwayo. 17 Ngapha koko, le miqondiso iya kubapheleka abo bakholwayo: Ngokusebenzisa igama lam baya kukhupha iidemon, baya kuthetha ngeelwimi, 18 ngezandla zabo baya kuphatha iinyoka, yaye ukuba basela nantoni na ebulalayo ayiyi kubenzakalisa konke konke. Baya kubabeka izandla abantu abagulayo, baphile.” 19 Ke, ngoko, iNkosi uYesu, emva kokuba ithethe nabo, yathatyathelwa ezulwini yaza yahlala ngasekunene kukaThixo. 20 Ngako oko, bona baphuma baya kushumayela kuyo yonk’ indawo, ngoxa iNkosi yayisebenza kunye nabo yaye isixhasa isigidimi ngemiqondiso esiphelekayo.